Xaqsoor: Doorashada Somaliland Waa Lagu Shubtey Caddeyn Ayaana Haynaa - Horseed Media
Xaqsoor: Doorashada Somaliland Waa Lagu Shubtey Caddeyn Ayaana Haynaa December 9, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleGuddoomiyaha Xaqsoor Xassan Ciise
Guddoomiyaha urur siyaasadeedka Somaliland ka jira ee Xaqsoor Xassan Ciise Jamac ayaa sheegay in cabashooyinka doorashada aysan Hargeysa ku koobneyn, isla markaana codsadey in la saxo gefafkii soo baxay oo dhan.
Waxaa la hayaa sanaadiiqdii doorashada oo lagu shubanayo iyaga oo gawaari saaran, waxaa la hayaa iyada oo geed hoosteed lala tegay oo duuban. ayuu yiri Xassan Ciise mar uu BBC-da u waramaayey.
Siyaasagan oo horey u noqdey Madaxweyne kuxigeenkii u horeeyey ee Somaliland ayaa sheegay in rabshadihii ka dhashey natiijadii doorashada dhimashadu ay hadda marayso saddex dhalinyaro ah.
Todoba urur ayaa u tartamey goloyaasha degaanka Somlailand waxaana guddiga doorashadu sheegeen in ay ku soo baxeen saddexda xisbi ee kala ah Kulmiye, Waddani iyo Ucid.
Ururada kala ah Ummadda, Xaqsoor iyo Rays ayaa sheegay in xisbiga Kulmiye doorashada ku shubtey lana musuq-maasuqay.
Dhegayso Waraysiga Xassan Ciise Jaamac [powerpress]